Iphupha H11 Imanzi kwaye Yomile, uhlalutyo olunzulu | Iindaba zegajethi
I-Dreame H11 imanzi kwaye yomile, uphononongo olunzulu lwesi vacuum / mop
UMiguel Hernandez | 28/12/2021 10:59 | ngokubanzi, Reviews
Ndothuke Ihlala ibekwe njengenye yeefemu ezibonelela ngomgangatho ongcono / umlinganiselo wexabiso kwicandelo lokucoca ikhaya elihlakaniphile, ngakumbi ukuba sithetha malunga nabacoci bayo, iirobhothi kunye nezinye izixhobo ezigxile ekwenzeni ubomi bethu bube lula xa kuziwa ekucoceni indlu yethu. .
Ngeli xesha sijonga nzulu kwi-H11 Emanzi kwaye Yomile, i-vacuum cleaner etshayela inzulu kwaye ikhuhla kwipasi enye. Sikubonisa le mveliso intsha yeDreme kwaye sikuxelela ukuba yintoni amava ethu ngokusetyenziswa rhoqo kwale mveliso eye yaguqula icandelo apho kungekho ndlela zininzi zinikwayo.
2 Umxholo wepakethi kunye namandla
3 Iimpawu zobugcisa kunye namava omsebenzisi
Xa ubheja kwi-brand efana neDreame, sele uyayazi into onokuyilindela malunga noyilo kunye nezinto eziphathekayo, ibonakaliswe ngokugqitywa kakuhle kunye nokukhanya kodwa iiplastiki ezixhathisayo ezinike ininzi yeemveliso zayo ubuntu obungenakulinganiswa, kwaye kwakungekho. ube ngaphantsi ngesicoci se-H11 esitsha, esinokunxulumana ngokukhawuleza ne-brand yase-Asia ngokukrwaqula. Imilinganiselo ichazwe kakhulu, kwaye oku kukhatshwa bubunzima obupheleleyo bokujikeleza 4,7 Kg kumzimba ogqithisileyo.
Esi sixhobo esihle kakhulu sinokuba sesakho ngexabiso elifanelekileyo
Induduzo ayiyi kuphumelela, oko kubonakala, nangona kunjalo i-rollers yayo kunye namandla ebrashi iya kwenza kube lula ukuba siqhube iipasi. I-Porting iyinkimbinkimbi encinci, ngoko ke ukubandakanywa kwesikhululo sokutshaja kunye nokuzicoca esiza kufumaneka phantsi. Ngokuqinisekileyo asijongi imveliso ekhaphukhaphu kunye neyona nto iguquguqukayo, nangona kunjalo, kufuneka sithathele ingqalelo iinjongo zeDream H11, kude nokukhanya okukhanyayo kunye nokucoca okuqhelekileyo, kunokuba kugxininise kwiindawo ezinkulu kunye nokufikeleleka okukhulu. Konke oku kufuneka sikuthathele ingqalelo phambi kokuba siqhubeke nokuthenga.
Umxholo wepakethi kunye namandla
Kude noko kubonakala ngathi, le Dreame H11 iza ngepakethe ebambene ngokufanelekileyo, isiphatho se-aluminium silula kwaye siyasuswa, ngaphezu kokusivumela ukuba silawule ukusebenza kwe-vacuum cleaner kunye namaqhosha anokuchukumisa okulungileyo. Umzimba onenjini, umtshayelo kunye neetanki zamanzi ezimbini zixhonywe ngqo kwibhokisi, kwaye zonke iindawo ezinxitywayo kunye nokugcinwa kwazo ziyasuswa, njengoko kuhlala kusenzeka eDreme. Ngenkqubo "yokucofa" siza kubeka isiphatho kwaye siya kuba neDream H11 ehlanganiswe ngokupheleleyo ukuqala ngeemvavanyo zokuqala.
Umxholo wepakethe njengoko sesitshilo u-spartan kakhulu, sifumana umzimba ophambili apho itanki ephindwe kabini, i-motor kunye nomtshayelo, isiseko sokutshaja kunye nokuzicoca, kunye neadaptha yamandla kunye nohlobo lwe "brashi" ukongezwa kwayo emanzini okanye ulwelo lokucoca oluya kusinceda sigcine iitanki zamanzi zicocekile. Kule candelo i-Dreame H11 isinika ukuvakalelwa kakuhle, ukufakela ngokukhawuleza kwaye asiyifuni imiyalelo ukuhamba. Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-Dreame iquka i-liquid ethile yokucoca esiza kukwazi ukuyithenga ngokukhawuleza ngokwahlukileyo, nangona singekafumani indawo yokuthengisa.
Oko kuthethiwe, usenokuba uyazibuza ukuba kutheni sithetha ngesininzi "Iidiphozithi", Oku kungenxa yokuba iDreme H11 ineetanki ezimbini ezahlukeneyo, enye yamanzi amdaka angama-500ml lo ufunyenwe emazantsi omtshayelo; kunye namanzi acocekileyo angama-900ml ejongene nokubonelela ngemophu ngolwelo lokucoca. Eli tanki lamanzi amdaka kulapho likwanoxanduva lokuzalela ubumdaka esibufunxayo.
Iphaneli ebonisa imisebenzi ephezulu iya kusibonisa iindlela ezimbini zokucoca: iStandard kunye neTurbo. Ngendlela efanayo, iya kusazisa malunga nepesenti yebhetri eseleyo kunye nokuba imodi yokucoca ngokwayo isebenza ngelo xesha, ekufuneka ibe kwisikhululo sokutshaja. Yile ndlela ekubambeni sifumana ngayo amaqhosha amabini ngaphambili ukuphatha amandla ahlukeneyo okucoca, kunye nelinye kwindawo ephezulu yesiphatho esijongene nokuvula imo yokuzicoca.
Okokuqala, siza kuthetha ngokuzimela, I-Dreame H11 inebhetri eyi-2.500 mAh eya kusinika ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30 yokuzimela ngendlela eqhelekileyo, oku kuya kuncitshiswa ngokubonakalayo ukuba siya kule nto iDreme ithatha imo ye-turbo. Ngokwenxalenye yayo, isicoci sevacuum sine I-10.000 yamandla okufunxa ipascal, ingaphantsi kancinci kunoko ikunika kwezinye izixhobo ezifana nezona zicoci zixhaphakileyo ngesandla, apho inokufikelela kuma-22.000, oko ibrashi yayo ejikelezayo ukuya kuthi ga kwi-560 revolutions ngomzuzu Kuya kunceda ukubamba ukungcola okugqithisiweyo kwaye oku kuvumela isixhobo ukuba sisebenze ngamandla asezantsi okufunxa.
Ngokwenxalenye yayo, ingxolo iya kufikelela kwi-76dB ekwasilela kakhulu kwiziphumo ezingcono kakhulu ezithe i-brand yakwazi ukunikela kwezinye izixhobo. Njengenzuzo, sinethuba lokuyithenga ngaphakathi Amazon, nazo zonke iziqinisekiso ezibandakanya oku.
Enye yeengxaki eziphambili esizifumeneyo, ngaphaya kobunzima, bubunzima be-brush, eya kusithintela ukuba singahambi phantsi kwefenitshala ethile, ngendlela efanayo kwaye sithathele ingqalelo indawo yokuya kuyo iDream H11, bekuya kuba umdla ukuquka isibane LED kwibrashi. Kwelakhe icala, kwaye njengoko bekulindelekile, Isiphumo se-parquet siyingozi, amanzi angaphezulu aya kushiya amanqaku abonakalayo, nangona kunjalo, le yimveliso eyenzelwe ngokukodwa imigangatho yeporcelain, ilitye kunye ne-vinyl, apho iziphumo ziye zaba ngcono kakhulu.
Le Dreame H11 yimveliso entsha emisela imigangatho ekufuneka ilandelwe kwicandelo njengesalathiso, nangona inamanqaku angaphawulekiyo anjengobunzima kunye nokufikelela okunzima phantsi kwefenitshala, inamandla okufunxa okulungileyo, izinto ezibalaseleyo zokwakha kunye nokugqiba kwaye iya kwenza izinto zibe lula kuthi logama nje singenayo i-parquet okanye imigangatho yamaplanga. Ixabiso layo lijikeleze Ii-euro ezingama-320 kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso njengeAmazon.
H11 Imanzi kwaye Yomile
Ithunyelwe nge: I-28 ngoDisemba 2021
Utshintsho lokugqibela: I-28 ngoDisemba 2021
Izinto ezigqitywe kakuhle kunye neziqinisekiso zoyilo
Amandla amahle kunye nokugqiba kakuhle kweporcelain
Ukufikelela kakubi kwifenitshala ephantsi
Iziphumo ezimbi kwiparquet
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Dreame H11 imanzi kwaye yomile, uphononongo olunzulu lwesi vacuum / mop